Flutter 2 yakatoburitswa uye inosvika seyakaumbwa hwese | Linux Vakapindwa muropa
Flutter 2 yakatoburitswa uye inosvika seyakaumbwa hwese
Google ichangobva kuburitsa kuunzwa kwe iyo nyowani vhezheni yeiyo UI chimiro Flutter 2, mairi yakazivisa shanduko yepurojekiti ye mobile application budiriro yekumisikidza kune yakasarudzika mamiriro ekugadzira chero mhando software, kusanganisira desktop uye webhu kunyorera.
Kune avo vasingazive Flutter, vanofanira kuziva kuti izvi inoonekwa seimwe sarudzo ye React Native uye inobvumidza kuvhurira mafomu emapuratifomu akasiyana, anosanganisira iOS, Android, Windows, macOS uye Linux, zvichibva pane imwecheteyo kodhi base, pamwe nemaapplication ekumhanya mumabhurawuza.
Mobile mapurogiramu akambonyorwa muFlutter 1, mushure mekuchinjira kuFlutter 2, anogona kuchinjika kuti ashande pane desktop newebhu pasina kunyora zvakare kodhi.
1 Nezve Flutter
2 Nezve Flutter 2
Mazhinji eiyo Flutter kodhi inoitwa muDart uye iyo injini yekumhanya yekumhanyisa kunyorera yakanyorwa muC ++.
Paunenge uchigadzira zvinoshandiswa, kuwedzera kune yemuno mutauro weFlutter Dart, unogona kushandisa iyo Dart yekunze basa chinongedzo kufonera C / C ++ kodhi.
Flutter kutakurika futi inosvika kumidziyo yakadzikai.e. kumidziyo midikis seRaspberry Pi uye Google Home Hub.
Panguva ino, Google inoti, imwe yemapuratifomu akadzika mukati umo Flutter yatove kushanda inoenderana nema smart kuratidza masisitimu anoshanda anopa izvo zvinofarirwa neGoogle Home Hub.
Kuita kwakanyanya kuita kunowanikwa nekunyora kunyorera mumuchina kodhia yezvinangwa mapuratifomu. Panguva imwecheteyo, hapana chikonzero chekudzokorora chirongwa mushure mekuchinja kwese: Dart inopa inopisa reload modhi iyo inobvumidza iwe kuti uchinje kune inomhanya kunyorera uye nekukurumidza ongorora mhedzisiro.
Nhasi, isu takazivisa Flutter 2 - hombe kuvandudza kuFlutter iyo inogonesa vanogadzira kuti vagadzire akanaka, anokurumidza, uye anotakurika maficha chero epuratifomu.
NaFlutter 2, unogona kushandisa imwecheteyo base kodhi kusundira maapple native kune mashanu mashandiro masystem: iOS, Android, Windows, macOS, uye Linux; pamwe nezviitiko zvewebhu zvinotungamirwa kumabhurawuza akadai seChannel, Firefox, Safari kana Edge. Flutter inogona kutosanganisirwa mumotokari dzakangwara, materevhizheni nemidziyo, ichipa ruzivo rwepasirese uye runotakurika kune nyika yekombuta kadiki.
Nezve Flutter 2
Flutter 2 inotaura kuti inoenderana zvizere nekuvaka zvikumbiro zvewebhu, yakakodzera zvigadzirwa zvekugadzira sezvo paine zviitiko zvikuru zvitatu zvekushandisa Flutter yewebhu:
Gadzira yakamira yega webhu kunyorera (PWA, Progressive Web Apps)
Gadzira imwechete peji webhu kunyorera (SPA)
Chinja mafoni ekushandisa muwebhu kunyorera.
Zvimiro zvezvishandiso zvekuvandudza padandemutande zvinosanganisira kushandiswa kwenzira dzekumhanyisa kupa kwe2D uye 3D mifananidzo, iyo inochinja mamiriro ezvinhu pazvinhu pachiratidziri, uye iyo CanvasKit inopa injini yakavakirwa muWebAssembly.
Uye nekuti mabhurawuza edesktop akakosha kungofanana nemabhurawuza efoni, isu takawedzera mabhatani ekupindirana uye mapfupi ekhibhodi, takawedzera huwandu hwehuwandu hwezvinhu mumadesktop modes, uye takawedzera rutsigiro rwekuverenga screen kuti uwane mukana muWindows, macOS uye Chrome OS.
Uyewo, chiziviso chinotaura kuti desktop desktop tsigiro iri mubeta uye ichagadzikana gore rino mukuburitswa mune ramangwana pamwe nekuzivisa kuti Canonical, Microsoft neToyota vachashanda pakutsigira rutsigiro neFlutter.
Nezvechikamu chayo, Canonical yakasarudza Flutter senge huru sisitimu yekushandisa kwayo uye iri kushandisa zvakare Flutter kugadzira nyowani nyowani yeUbuntu.
Ipo Microsoft payakashandura Flutter yezvipenga zvakapetwa akawanda-skrini seSurface Duo.
Chekupedzisira, Toyota inoronga kushandisa Flutter kune-mota infotainment masystem.
Si iwe unoda kuziva zvakawanda nezvazvo Nezve iyi vhezheni nyowani yeFlutter 2, unogona kutarisa ruzivo mune yekutanga chiziviso. Iyo yekubatanidza ndeiyi.
Nguva kune avo vanofarira kugona kuisa Flutter, Iwe unogona kuteedzera iyo mhedzisiro panoperera positi yaDiego. Iyo yekubatanidza ndeiyi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Flutter 2 yakatoburitswa uye inosvika seyakaumbwa hwese
Google inopa GKE Autopilot, maneja kunyatsogadzirisa Kubernetes